ကိုဗစ်ဆိုတာ ကြောက်ရမယ့်ရောဂါ မဟုတ်ဖူး တိုက်ထုတ်ရမယ့်ရောဂါ - Celefans
[ November 17, 2021 ] စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြိမ်ကြိမ်…. ခံရသူ ကိုယ်ဝန် ခုနှစ်လနှင့် အမျိုးသမီးအား မေးမြန်းချက်	Local News
[ November 17, 2021 ] ကလေးမြို့ လေဆိပ်အနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား	Local News
[ November 16, 2021 ] ကလေးမြို့ PDF စခန်းကို စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်စီး	Uncategorized
[ September 15, 2021 ] MyTel တာဝါတိုင္မ်ားအား၊ဗုံးခြဲဖ်က္ဆီးသူေတြကို ၊ ဖမ္းမိခဲ့ရင္	Local News
[ September 15, 2021 ] အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံကို အမြန်ဆုံးသွားရောက်ဖို့ ကန်တိုက်တွန်း	Local News
HomeKnowledgeကိုဗစ်ဆိုတာ ကြောက်ရမယ့်ရောဂါ မဟုတ်ဖူး တိုက်ထုတ်ရမယ့်ရောဂါ
ကိုဗစ်ဆိုတာ ကြောက်ရမယ့်ရောဂါ မဟုတ်ဖူး တိုက်ထုတ်ရမယ့်ရောဂါ
August 2, 2021 Cele Fans Knowledge Comments Off on ကိုဗစ်ဆိုတာ ကြောက်ရမယ့်ရောဂါ မဟုတ်ဖူး တိုက်ထုတ်ရမယ့်ရောဂါ
ကြောက်တယ် စိတ်ဓာတ်ကျတယ် အစားမစားနိုင်ဘူးဆိုရင် အောက်စီဂျင်ကျဖို့ သေချာသလောက်ပဲ။အမေ နေမကောင်းဖြစ်နေတုန်းကဆိုရင် ဘယ်နှစ်ယောက်သေသေ လုံးဝပေးမသိဘူး အပြုံးမပျက် ညီအစ်မတွေ ပြုစုကြတာ။
အမေဆို အောက်စီဂျင် ၅၈ထိ ကျဖူးတယ်။အမေရှေ့မှာတော့ တပြုံးပြုံးနဲ့ပေါ့ အမေ မမြင်အောင် မျက်စပစ်ပြီး အခြေနေတွေကို ညီအစ်မတွေ အသံတိတ် တိုင်ပင်ခဲ့ဖူးတယ်။
အရမ်းတော်တဲ့ ညီမ နှစ်ယောက်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ် နောက်ကနေ လိုအပ်သမျှကို ဖြည့်ဆည်းပေးကြရှာတယ်။
Oximeterတိုင်းပြီးရင် “တက်လာတယ် အမေ ကောင်းနေပြီ”ဆိုပြီး အမေ့ကို လိမ်ပြောဖူးတယ်။အစားကို ချော့ကျွေး ခြောက်ကျွေး ငိုကျွေးဖူးတယ်။အစားကို မပြတ်ရအောင် အမြဲကျွေးတယ်
မနက်ကို ဆန်ပြုတ် စွပ်ပြုတ် Ensure /နေ့လည် ထမင်းနဲ့ စွပ်ပြုတ် အမေ စားချင်စိတ်ဖြစ်အောင် အမဲကြော် ငပိကြော် ချဉ်ပေါင်ခါး/ နေ့လည် အစာပြေ ကြက်ဥ ပေါင်မုန့် Ensure ငှက်သိုက်/ ညစာကို ထမင်းနဲ့ နေ့လည်က ဟင်းမဟုတ်တဲ့ဟာ ထပ်ချက်ကျွေး။ တစ်ရက် တစ်ရက်ကို ဟင်းမထပ်အောင် ရှာကြံ ချက်ကျွေးရတာလည်း အမော ။
မှတ်မှတ်ရရ ဈေးထဲသွား လိုအပ်တာဝယ်မယ်ဆိုပြီး ကွက်တိယူသွားတာ။ ပုဇွန်မြင်တော့ အမေ့ကို ထမင်းပူပူ ပုဇွန်ကြော် လေးနဲ့ ကျွေးချင် ပိုက်ဆံကမလောက် မထူးပါဘူးဆိုပြီး ကိုယ်ဝယ်နေကျ ဂေါ်ဖီထုပ်ဆိုင်က အမဆီမှာ ချေးပြီး ဝယ်ကျွေးဖူးတယ်။
အမေကလည်းပြောပါတယ် “ငါမရှိရင် ငါ့သားသမီးတွေ သနားစရာ မိဘမဲ့ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီး ကြိတ်မှိတ်စားခဲ့တယ်”တဲ့ အဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်မိတယ် အမေ။ခုတော့ မိသားစု အပွန်းအပဲ့မရှိ ကိုဗစ်ကို တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီလေ ❤
ကိုဗစ္ဆိုတာ ေၾကာက္ရမယ့္ေရာဂါ မဟုတ္ဖူး တိုက္ထုတ္ရမယ့္ေရာဂါ။
ေၾကာက္တယ္ စိတ္ဓာတ္က်တယ္ အစားမစားနိုင္ဘူးဆိုရင္ ေအာက္စီဂ်င္က်ဖို့ ေသခ်ာသေလာက္ပဲ။အေမ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတုန္းကဆိုရင္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေသေသ လုံးဝေပးမသိဘူး အျပဳံးမပ်က္ ညီအစ္မေတြ ျပဳစုၾကတာ။
အေမဆို ေအာက္စီဂ်င္ ၅၈ထိ က်ဖူးတယ္။အေမေရွ႕မွာေတာ့ တျပဳံးျပဳံးနဲ႔ေပါ့ အေမ မျမင္ေအာင္ မ်က္စပစ္ၿပီး အေျခေနေတြကို ညီအစ္မေတြ အသံတိတ္ တိုင္ပင္ခဲ့ဖူးတယ္။
အရမ္းေတာ္တဲ့ ညီမ ႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္ ေနာက္ကေန လိုအပ္သမၽွကို ျဖည့္ဆည္းေပးၾကရွာတယ္။
Oximeterတိုင္းၿပီးရင္ “တက္လာတယ္ အေမ ေကာင္းေနၿပီ”ဆိုၿပီး အေမ့ကို လိမ္ေျပာဖူးတယ္။အစားကို ေခ်ာ့ေကၽြး ေျခာက္ေကၽြး ငိုေကၽြးဖူးတယ္။အစားကို မျပတ္ရေအာင္ အျမဲေကၽြးတယ္
မနက္ကို ဆန္ျပဳတ္ စြပ္ျပဳတ္ Ensure /ေန႔လည္ ထမင္းနဲ႔ စြပ္ျပဳတ္ အေမ စားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေအာင္ အမဲေၾကာ္ ငပိေၾကာ္ ခ်ဥ္ေပါင္ခါး/ ေန႔လည္ အစာေျပ ၾကက္ဥ ေပါင္မုန္႔ Ensure ငွက္သိုက္/ ညစာကို ထမင္းနဲ႔ ေန႔လည္က ဟင္းမဟုတ္တဲ့ဟာ ထပ္ခ်က္ေကၽြး။ တစ္ရက္ တစ္ရက္ကို ဟင္းမထပ္ေအာင္ ရွာႀကံ ခ်က္ေကၽြးရတာလည္း အေမာ ။
မွတ္မွတ္ရရ ေစ်းထဲသြား လိုအပ္တာဝယ္မယ္ဆိုၿပီး ကြက္တိယူသြားတာ။ ပုဇြန္ျမင္ေတာ့ အေမ့ကို ထမင္းပူပူ ပုဇြန္ေၾကာ္ ေလးနဲ႔ ေကၽြးခ်င္ ပိုက္ဆံကမေလာက္ မထူးပါဘူးဆိုၿပီး ကိုယ္ဝယ္ေနက် ေဂၚဖီထုပ္ဆိုင္က အမဆီမွာ ေခ်းၿပီး ဝယ္ေကၽြးဖူးတယ္။
အေမကလည္းေျပာပါတယ္ “ငါမရွိရင္ ငါ့သားသမီးေတြ သနားစရာ မိဘမဲ့ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ႀကိတ္မွိတ္စားခဲ့တယ္”တဲ့ အဲ့အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္မိတယ္ အေမ။ခုေတာ့ မိသားစု အပြန္းအပဲ့မရွိ ကိုဗစ္ကို တိုက္ထုတ္နိုင္ခဲ့ၿပီေလ ❤
ဖျားပြီ ညောင်းကိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာ လက်ခံလိုက်ပါ
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ ဩဂုတ် ၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား နုတ်ထွက်ကြဖို့ ပုလဲ PDF သတိပေး
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြိမ်ကြိမ်…. ခံရသူ ကိုယ်ဝန် ခုနှစ်လနှင့် အမျိုးသမီးအား မေးမြန်းချက်
ကလေးမြို့ လေဆိပ်အနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
MyTel တာဝါတိုင္မ်ားအား၊ဗုံးခြဲဖ်က္ဆီးသူေတြကို ၊ ဖမ္းမိခဲ့ရင္
အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံကို အမြန်ဆုံးသွားရောက်ဖို့ ကန်တိုက်တွန်း